Kuo Zvino Anoti Tichaona iyo Pro Pro ine Mini-LED Ino Gore | Ndinobva mac
Kuo ikozvino anoti isu tichaona iyo Pro Pro ine mini-LEDs gore rino
MacBooks uye iPads inofanirwa kuve yekutanga kuve nerudzi urwu rwe mini-LED skrini asi zvinoita sekudaro pakupedzisira maMac achasiiwa kumashure mujaho wekumisikidza kwayo. Ehezve, isu tiri kutaura nezverunyerekupe uye Ming-Chi Kuo, saka izvi hazvisi pamutemo zvakasimbiswa zvachose.
Mujaho wekuwedzera idzi skrini kuApple michina inoita kunge inokundwa zvakare neiyo nyowani Apple iPad Pro, iyo zvakare inoita kunge ichapihwa pamberi pekupera kwegore ... Mu Cupertino vanga vachishanda nerudzi urwu rwezvidzitiro kwenguva refu time uye zvinoita sekunge pakupedzisira iyo Pro Pro yaizotora jack kuenda kumvura, asi Vachavhurwa gore rino apo iPad Pro yakavhurwa munaKurume?
Kuo akataura mazuva mashoma apfuura kuti matsva macloud aigona kusvika pakutanga pane zvaakarongera MacBooks asi nhasi achinja pfungwa pamwe nekuratidzwa newebsite yeMacRumors. Runyerekupe kubva kune vaongorori vanochinja nguva zhinji uye mune ino kesi hapana chinogona kusimbisa chigadzirwa kana zuva remidziyo yekutanga nerudzi urwu rwechidzitiro.
Iyo inofungidzirwa iPad Pro ine 12,9-inch skrini gare gare gore rino ndizvo zvinotaurwa naKoo mune runyerekupe rutsva. Pamwechete, pakanga paine kutaura kwekuuya kwezvigadzirwa izvi zve2021 uye zvinoita sekunge izvozvi zvave kutanga kupera kwa2020. Isu hatinyatso kujeka nezve chero chinhu mune izvi uye isu tichafanirwa kuve nemoyo murefu nerunyerekupe rwunopfuurira kusvika sezvo vachipesana ... Chii chinoita kunge chiri pachena ndechekuti Apple iri kushanda kana kutsaurira yakawanda kuyedza mukuitwa kwerudzi urwu rwezvikwiriso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Kuo ikozvino anoti isu tichaona iyo Pro Pro ine mini-LEDs gore rino
Keynote, Mapeji uye Nhamba dzakarova shanduro 10.2
Apple's Nyowani Yakarukwa Solo Loop Tambo Inogona Kuwedzera Muhukuru Kupfuura Nguva